Otu esi etinye Sublime Text 3 na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
July 13, 2021 July 6, 2021 by Jọshụa James
Budata & Wụnye
Mwepụta Ederede Sublime 3
Na-ewepu Sublime Text Editor
Ederede Dị ebube 3 (ST3) bụ onye ndezi koodu mara maka ọsọ ya, ịdị mfe nke iji ya, ikpo okwu na ntinye na nkwado obodo. Enwere ike ịhazi ma kwalite ngwa ahụ site na ịwụnye atụmatụ ndị ọzọ site na iji njikwa ngwugwu na ntọala omenala.
Ị ga -ama otu esi etinye Sublime Text 3 na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa gị Sistemụ arụmọrụ na ntuziaka na-esonụ. Otu ụkpụrụ ahụ ga-arụ ọrụ maka ụdị ọhụrụ Ubuntu 21.04 (Hirsute Hippo).
Tupu ịmalite, jide n'aka na usoro Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa dị ọhụrụ:
Na-esote, wụnye ndabere achọrọ iji budata ebe nchekwa ọhụrụ n'elu protocol HTTPS:
Ị ga-ebubata igodo GPG iji gbakwunye ebe nchekwa ahụ nke ọma. Tinye iwu a:
Ị ga-enweta nsonaazụ a"Ok". Ozugbo emechara, melite na budata Sublime Text 3 site na ịpị:
Mara, ị nwekwara ike iji ngwungwu Snap maka ịwụnye editọ ederede mara mma. Iwu wụnye snap nwere ike ime nke a:
Nwụnye akwadoro na-abụkarị ụzọ a na-esi eme ya site na iji ebe nchekwa sitere na ederede dị mma n'elu snaps. Snaps na-eburukwa akara ukwu na draịvụ ike gị. Agbanyeghị, maka ịdị mma, snaps nwere ike ịdị mfe idobe na ịwụnye.
Ọ dị mma, yabụ ị wụnyela ngwugwu ngwanrọ, ugbu a bụ oge ịmalite ngwa ahụ. Enwere ike ime nke a n'ụzọ ole na ole dị iche iche. Kacha nkịtị bụ Ihe omume -> Ebube site na desktọpụ Ubuntu gị ma ọ bụ n'okpuru:
Malite Ederede Dị Mma nke 3 site na ọnụ:
Malite Ederede Dị Mma 3 site na NchNhr ngwa:
Oge mbụ ị malitere Sublime Text, ị ga-ahụ windo na-esote. Ileghara akụkụ edebanyeghị aha ọ gwụla ma ị na-eme atụmatụ iji ngwanro maka iji azụmahịa/ụlọ ọrụ.
Ọ bụrụ na ịchọkwaghị ederede dị mma, ịnwere ike iwepu ya na sistemụ arụmọrụ gị dịka ndị a:
Wepu ihe nrụnye dabara adaba:
Wepu nwụnye ngwa ngwa:
Mara, ị nwekwara ike wepu Ederede kacha mma dabara adaba site na ịnweta Ntọala Sistemu -> Ngwanrọ & Mmelite -> taabụ ngwanrọ ndị ọzọ.
Ị mụtala otu esi etinye Sublime Text 3 na sistemụ arụmọrụ Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa gị site n'ịmụ ka esi etinye ebe nchekwa isi iyi yana akụkụ ndị ọzọ nke nrụnye snap. Ugbu a, ị nwere ike ịga na Njikwa ngwugwu ederede kacha mma, nke ị nwere ike budata atụmatụ ndị ọzọ iji hazie ndezi ederede Sublime gị ka ihe ị chọrọ.
Ka ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara Ederede Sublime, gaa na onye ọrụ gọọmentị Akwụkwọ ederede kacha mma page.
Otu esi etinye Steam na Ubuntu 20.04